चीन कट-टु-साइज सेवा कारखाना र आपूर्तिकर्ता डोhuaहुआ
DHUA किफायती मूल्यहरु मा उच्च गुणवत्ता कस्टम प्लास्टिक निर्माण प्रदान गर्दछ। हामीले एक्रिलिक, पॉली कार्बोनेट, PETG, Polystyrene, र अधिक धेरै पानाहरू काट्यौं। हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईंलाई प्रत्येक ऐक्रेलिक वा प्लास्टिक निर्माण प्रोजेक्टको तल लाइनमा फोहोर कम गर्न र बचत गर्नको लागि मद्दत गर्नु हो।
पाना सामग्रीले निम्न समावेश गर्दछ:
• Extruded वा एक्रिलिक कास्ट
• र अधिक - कृपया सोध्नुहोस्
Pअन्तिम पानाहरू CUT गर्न Size र निर्माण सेवाहरू
DHUA थर्मोप्लास्टिक शीट सामग्री विकल्पको एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछ र कला काटने समाधान को राज्य को सबै तपाइँको निर्माण आवश्यकताहरु को लागी। हाम्रो लक्ष्य भनेको तपाईंलाई प्रत्येक ऐक्रेलिक वा प्लास्टिक निर्माण प्रोजेक्टको तल लाइनमा फोहोर कम गर्न र बचत गर्न मद्दत गर्नु हो।
हामी रक्तस्राव एज CNC र लेजर काटने उपकरण संग उच्च परिशुद्धता काटने सेवाहरु प्रदान गर्दछौं। हामी तपाईंको इच्छित छवि, स्लोगन, लोगो, उद्धरण, आदिलाई काट्न र कुनै पनि आकार, आकार, र तपाईंले चाहानु भएको शैलीमा ई style्ग्रेभ गर्न सक्छौं। एक साधारण पानादेखि जटिल रूपरेखा र लेबलिंग, एकल टुक्रा वा श्रृ .्खला उत्पादन - यो सबै हाम्रो अत्याधुनिक उपकरणको साथ सम्भव भएको छ।
लेजर काटना & CNC कार्य
लेजर काटने: यो ज्यामितीय सरल र जटिल वस्तुहरूको लागि आदर्श हो जुन अत्यधिक विस्तृत सटीकताका साथ मिल गर्न सकिन्छ। लेजर काटिएको प्लास्टिक सामग्रीको किनारहरूमा चमकदार फिनिश हुन्छ - उदाहरणका लागि लेजर कट एक्रिलिक वा कस्टम कट plexiglass। योसँग लचिलोपनको उच्च डिग्री छ र जटिलताको कुनै पनि स्तरमा परियोजनाहरू ह्याण्डल गर्न सक्दछ। लेजर काट्ने मेसिनले एक्रिलिक जस्ता सामग्रीको किनारहरूमा चमकदार प्रभाव छोड्दछ।
CNC काटने: यो ज्यामितीय सरल र जटिल वस्तुहरूको लागि उत्कृष्ट हो जुन अत्यधिक विस्तृत सटीकताका साथ मिल गर्न सकिन्छ। कुनै अन्य काट्ने वा कुँदिएका मेशीनले सीएनसी भन्दा ठोस सामग्रीमा राम्रो प्रदर्शन गर्दैन। एक सीएनसी काटनेको मेशिनको साथ, आवश्यक उत्पादन अनुकूलन आकार, आकार र एक विशिष्ट रचनात्मक डिजाइनको साथ स्टाइल गर्न सकिन्छ।
कस्टम काटि and र उत्कीर्णन (लेजर र सीएनसी कटिंग)
प्रेसिजन कटिंग: ए C्गल कट्स, ब्यान्डसा कट्स, प्याटर्न्स, सर्कल कट्स
प्रेसिजन होल ड्रिलिंग, काउन्टरसिinkक, ट्याप गर्दै
एक्रिलिक वा अन्य प्लास्टिक शिटहरूमा प्रिन्ट गर्दै
निर्माण र विधानसभा
उत्पाद डिजाइन र ईन्जिनियरिंग
कट-टु-अर्डर एक्रिलिक वा अन्य प्लास्टिक पानाहरू
रेखाचित्र वा रेखाचित्र
सामग्री र मोटाई
एआई फाइल वा पीडीएफ लेजर काटने कामहरूको लागि
हाम्रो दिशानिर्देश आवश्यकताहरू:
उच्च गुणस्तरको प्लास्टिक, अनुकूलन Fabrications. आज उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्! हामी डिजाइनको मद्दत गर्न तयार छौं र तपाईको परियोजनाको लागि तपाईलाई चाहिएको कुरा सिर्जना गर्न हामी तयार छौं।
एक्रिलिक गार्डन मिरर आकार गर्न कटौती
आकारमा एक्रिलिक मिरर कट
एक्रिलिक मिरर पाना आकारमा काट्नुहोस्
आकार एक्रिलिक मिरर काट्नुहोस्
कट्टेबल मिरर पाना
एक्रिलिक मिरर काट्ने
लेजर काटनेको लागि ग्लिटर एक्रिलिक पाना
लेजर काट मिरर एक्रिलिक
मिरर एक्रिलिक पाना आकारमा काट्नुहोस्